Radio Madhya Paschim राप्ती उपक्षेत्रिय र अञ्चल अस्पताल निमित्तको भरमा
घोराही, २३ साउन ।
दाङको राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पताल र राप्ती अञ्चल अस्पताल लामो समय देखी निमित्तको भरमा चल्दै आएको छ । दुई बर्ष पहिले देखी राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पताल निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. जनार्दन पन्थीले नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ ।
उता तुलसीपुरको राप्ती अञ्चल अस्पताल पनि डेढ वर्षदेखि निमित्तको भरमा सञ्चालनमा छ । अस्पतालमा मेडिकल सुपरिडेण्डेन्टका रुपमा कार्यरत डा. भोला श्रेष्ठ डेढ वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालमा काज सरुवा भएर गएपछि हालसम्म डा. विनोद सिंहले निमित्तको रुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ ।
लामो समयदेखि अस्पतालमा मेडिकलसुपरिटेण्डन्ट नहुँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको सेवाग्राहीहरुको भनाई छ । साथै उपचार गराउने जानेहरुले अस्पताल रिफर सेन्टर मात्रै बनेको समेत गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट सिंहले पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको बताउनुहुन्छ ।
दाङका उपक्षेत्रिय र अञ्चल अस्पतालमा दाङ, रुकुम, सल्यान, रोल्पा र जाजरकोटलगायत जिल्लाबाट बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । उचित उपचार पाउन नसकेपछि बिरामी नेपालगञ्ज, कोहलपुर, बुटवल, काठमाडौँ तथा भारत जाने गरेका छन् ।।